Furitaanka Shaqooyinka | Carewell SEIU 503
Carewell SEIU 503, oo ay soo dhiibtay Iskaashatada RISE
Waxaa abuuray oo lala xisaabtami karaa aaminaadaheena, RISE Partnership waxay bixisaa noocyo badan oo faa'iidooyin gaar ah iyadoo ka wakiil ah aaminaadaha Shaqada-Maamulka iyo kuwa aan macaash doonka ahayn. Isku soo biirid, waxaan shaqaalaha siineynaa ilo iyo kalsooni si ay uga faa'iideystaan faa iidooyinka ay gorgortamayaan ururkooda.
Ma jeceshahay inaad ka mid noqotid koox hiigsanaysa ujeeddada?
Iskaashatada RISE hadafkeenu waa inaan sare u qaadno daryeelka guriga iyo shaqaalaha taakuleynta shaqsiyadeed iyadoo la keenayo tababarro iyo faa'iidooyin gaar ah, isku dhafan.
Waxaan ku faraxsanahay inaan ku taageerno shaqaalaha ixtiraam, sharaf, adeeg, iyo sinaan. Haddii aad la wadaagto qiimayaashan, fadlan tixgeli inaad dalbato mid ka mid ah boosaska aan heli karno
Ma jiraan furitaan shaqo oo hadda ka socda kooxda Carewell SEIU 503.
Halkan guji si aad u aragto dhammaan shaqooyinka ka furan RISE Partnership.